Aiza no ahafahana miverina amin'ny finday avy amin'ny infografika?
Amin'izao fotoana izao dia mitombo hatrany ny sary an-jorony. Raha ny marina, ireo sary manintona mitondra loharanom-baovao mahasoa ireo dia heverina fa in-30 heny kokoa "ho simba" avy amin'ny mpamaky, fa tsy soratra soratra tsotra tsotra. Izany no mahatonga ny fanontaniana - ny toerana ahafahana miverin-dahatsary avy amin'ny infographics - dia manome fahatsapana tonga lafatra. Eny, marina izany, ny infographics dia afaka manome valiny goavana amin'ny fandraharahana an-tserasera. Ny zavatra tokony hijerena amim-pahaizana kokoa dia ny hampifangaroany ny angon-drakitra manan-danja sy ny votoaty hita maso - sady manintona ny saina, ary manome fampahalalana mahaliana sy mahaliana amin'ny lohahevitra tsara amin'ny mpihaino. Ny tena zava-dehibe - ny fametrahana andian-tsarimihetsika tsara sy mandresy lahatra dia mahatonga ny votoatiny horaisina ho virjiny. Amin'izany fomba izany, manana fitaovana tsara ho an'ny HQ ny backlink, ary manatsara ny fivoaran'ny tranokalan-tranonao na ny fivoaran'ny blôgy SEO amin'ny sehatra. Noho izany, aiza no ahafahana miverina amin'ny finday avy amin'ny infografika? Alohan'ny hanehoana anao ny lisitr'ireo loharanom-baovao voasoritra ho an'ity, andeha hanomboka amin'ny famaritana fototra fototra. Inona avy ireo fotodrafitrasa tsara indrindra? Ireto misy singa fototra telo mahatonga ny tsara rehetra - fahagagana mahavariana, fampiroboroboana sy fanentanana ary statistika fikarohana tsara.
Ny endri-javatra dia toa ny zavatra voalohany ilaina amin'ny sary tsirairay hanombohana. Ny zavatra rehetra ilainao haleha amin'ny infografika dia ny fanehoana azy ireo amin'ny endrika-manintona ary manohina azy amin'ny famolavolana matihanina.
Ny fampiroboroboana sy ny fitoriana dia zava-dehibe ho an'ny infographics ho toy ny endrika mahatalanjona sy ny lanjany marina avy amin'ny antontan'isa fikarohana. Satria ny fampahalalam-baovao tsy manatsara ny làlana marina (i. f. , miaraka amin'ny fampiroboroboana fampahalalam-baovao mahazatra ary ohatra amin'ny mailaka amin'ny alàlan'ny mailaka), ny sisa rehetra dia ho saika tsy misy ilana azy, azo antoka.
Ny antontan'isa fikarohana dia midika fa ny fanazavana tsara rehetra dia tokony hitondra fanazavana sarobidy, toy ny statistika mahaliana, seho tsy fahita firy momba ny lohahevitra iray, fandinihana mazava tsara, na zavatra hafa toy ny tabilao mandaitra na diagram.
Ary eto ny toerana ahafahana miverin-dalana avy amin'ny infografika - eto ambany dia lisitr'ireo rafitra enina indrindra farafaharatsiny mba hanampy anao amin'ny famolavolana ny voalohany anao:
Piktochart dia mora fampiasana fitaovana hanamboarana infografika HQ ​​ho an'ny backlinks avo lenta. Ataovy amim-pahalemem-panahy ny endrikao tsirairay avy. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mametraka fotoana vitsivitsy amin'ny famoronana sary manintona izay milaza fa "mandray" ny fizarana. Ny drafitra maimaim-poana ao amin'ny Piktochart dia manome vahaolana vitsivitsy amin'ny vahaolana mety tsara, izany no antony raha toa ka vonona sy vonona ny hiasa bebe kokoa amin'ny informatika kalitao ianao - tsara kokoa ny mandoa vola amin'ny sandany.
Canva dia loharano tsara hafa izay afaka manampy anao hampiasa sary maimaimpoana maimaim-poana. Ary mahafinaritra izy ireo! Manana tombony avy amin'ny informatika matihanina amin'ny fanatontosana amin'ny famokarana rakitra, fitarihana, fizarana, ary manaraka.
Ny Infografika momba ny fandriam-pahalemana no fitaovana maoderina mora indrindra azonao alaina sary an-tsaina. Manaova drafitra lehibe hifidy iray amin'ireo vahaolana maoderina mihoatra ny dimanjato matihanina - eo amin'ny tsindry maromaro.
Fiverr no safidy farany nasehon'ireo izay mijery ny toerana ahafahana miverina amin'ny finday avy amin'ny infographics. Ny Fiverr dia ho lasa vahaolana tsara indrindra, raha te-haka ny endrika nofinidinao manokana ianao - manomboka amin'ny 5 bucks ho an'ny tranonkala malaza iray natao manokana ho an'ny tranonkalanao na bilaogy Source .